जीन्दगी जीउन भन्दा मर्न साह्रै गा¥हो रैछ दिदी::DainikPatra
के गर्नु कर्म फुटेको भएपछि भाग्यले पनि ठग्दो रहेछ, जब आफ्नो श्रीमानले हेला गर्छ सबैको हेला भइदो रहेछ । सबैले बलेको आगो मात्र ताप्ने रैछन् । यो भनाइ हो देवदह ढेकारकी २४ वर्षे विपनाको । स्कूल पढ्दा पढ्दै पे्रेम विवाह गरेकी विपनालाई अहिले घर न घाटको भएजस्तै महशुस भएको छ । विपना भन्छिन् पहिला सबै राम्रो थियो अहिले श्रीमान् केही काम गर्दैनन् सधै जसो रक्सी खाएर टिल्ल परेर आउँछन् । आएर केही नगरे त हुन्थ्यो नि ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्छ । साना छोरा छोरी छन । जाऊँ भने कहाँ जाऊँ मैले पनि छोडेर गएभने छोराछोरीको सराप लाग्ला बसूँ भने बसेजस्तो छैन । दुइपटक आत्मा हत्याको प्रयास पनि गरे । फेरि ति छोराछोरीको मायाले मलाई मर्न दिएन फर्केर आएं । मर्नलाई पनि सजिलो रहेनछ । ठूलो छोरा ५ वर्षको भयो उसले मम्मी मलाई छोडेर कहिं नजानु भन्छ आँखाभरी आँसु झार्दै सुक्क सुक्क गर्दै भक्कानिइन् बोल्नै सकिनन् ।
देवदह नपा–१२ की सुुशीला १९ वर्षकी भइन् । सुशीलाका ४ वर्षका एक छोरा छन् । सुशीलाको ४ वर्ष अगाडि मागी विवाह भएको हो । सुशीलाका श्रीमान पूर्व लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता रहेछन् । सुशीला भन्छिन् । मेरो विवाह पहिला ढाँटेर, झुक्काएर गरियो । गाँजा चरेस, भाङ धतुर सबै खाने मान्छेसँग विवाह गरिदिए । विवाह भएको ४, ५ महिनासम्म मलाई र मेरो माइतीलाई केही पनि थाहा थिएन । एक्कासी भैरहवा पुलिसले समातेपछि बल्ल थाहा भयो कि पहिला पनि पुलिस केसमा परिसकेको मान्छे रैछ । पुलिस केश लागेपछि ३ महिना भैरहवामा राख्यो र छुट्यो । अब त सुध्रिएला बुद्धि पलाउला भने तर उसलाई बानी परिसकेको रैछ । उसले घरमा भएका किम्ती सामानहरु पनि बेचेर सकायो हुँदाहुँदा त सुतेको बेलामा मेरो घाँटीको मंगलसुत्र पनि लगेर बेचेर खाइदियो । के गर्नु उस जुनीमा मैले के गल्ती गरेको रहेछु । त्यसको सजाय पाउँदै छु । कहिलेकाँही त लाग्छ आमाछोरा दुबै एकैचोटी मर्न पाए नि हुन्थ्यो । मलिनो स्वरमा लामो श्वास तान्दै भनिन् । एकपटक रोहिणी खोलामा बाढी आएको बेला छोरासँगै हाम फालेर मर्छु भनेर घरबाट हिंडे । १२ सय पैसा र कानमा लगाएको टप खोलेर टेबलमा राखिदिए म मरेपनि दुई चार दिन खाओस भनेर । बाढी ओर्लेर आयो बाबुले मम्मी घर जाने भनेर खूब रोयो फेरि मनमा विभिन्न कुरा खेले फेरि फर्केर आए ।
देवदह सिक्टनकी बसन्ती २३ वर्षकी भइन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । बसन्तीका श्रीमान् मजदूरी काम गर्छन् । बसन्ती भन्छिन्, दिनभरी सँगसँगै इँटा भट्टामा मजदुरी गर्छे । साँझ आएर सबै पैसा रक्सीमा उडाउँछन्, एक दिन काम गर्न गए ७ दिन काममा जादैनन्, रक्सी खाँदै कराउँदै घरमै बस्छन् । केही बोले खाए त मेरै कमाई खाए तेरा बाउको खाएको छैन भन्दै जे पायो त्यही टिपेर हिर्काउँछन् । एक पटक इँटाले हानेर मेरो दाइने हात नारीबाट भाँचिदिए । रक्सी नखाँदा ठिकैछन खाएपछि बौलाउँछन् । जे भेटायो त्यसैले झटारो हान्छन् । दुईओटा छोराछोरी छन् । यिनीहरुलाई कसरी हुर्काउने, के गर्ने ? कसरी जीन्दगी जानसक्छ यसरी ? लामो श्वास फेर्दे आँखाबाट आँसुका ढिक्का खसाल्दै भनिन् । जीन्दगी जीउन भन्दा पनि मर्न साह्रै गाह्रो रैछ दिदी कस्तो मान्छेसँग मेरो विवाह भएछ । छोरा छोरीको कारणले गर्दा न मर्न सक्छु न बाँचेर बाँचे जस्तो भएको छ आँखाबाट बरर आँसु खसाल्दै भक्कानिइन् ।
देवदह नपा सिक्टनकी पार्वती २६ वर्षकी भइन पार्वतीका श्रीमान गाडी चालक हुन् । उनले बुटवल भैरहवा चल्ने माइक्रो बस चलाउँछन् । पार्वती भन्छिन् गाडी चलाए पनि श्रीमान्ले कमाएको पैसा रातो हुन्छ कि सेतो हुन्छ अहिलेसम्म देखेकी छैन । घरमा बुढा बा आमा हुनुहुन्छ केही वास्ता छैन । घरमा कहिलेकाँही आउँदा पनि रक्सीले मातेर आउने र झगडा मात्र गर्छन् । केही बोल्न हुँदैन के कुरा गर्नु कुरा गरे आफ्नै बेइज्जत हुन्छ । तीनवटा छोरा छोरी बुढा बा आमा कसरी के गरेर जीन्दगी बिताउनु यस्ता अधर्मीसँग । छोराछोरीले एउटा दानो चकलेट पनि खाएका छैनन् । गाडी चलाउछु भन्छन् गाँजा खाएर बरालिएको जस्तो लाग्छ । घरमा आउँदा खाएर बेहोसी तालमा आउने हो । त्यस्ताको के आँस गर्नु दिदी ।
विपना,सुशीला, पार्वती र बसन्ती मात्र होइन् सानै उमेरमा विवाह गरेर अनेकौ प्रकारका शारिरीक तथा मानसिक पीडा खेपिरहेका महिला, दिदी बहिनीहरु धेरै छन् हाम्रो समाजमा । विभिन्न किसिमका पीडा खेपेर पटक–पटक मरेर बाँचिरहेका छन् । कतिपयले यस्तै कारणले गर्दा आत्माहत्यासम्म गर्न पुग्छन् । नेपाल प्रहरीको प्रदेश नं. ५ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने भने पनि आत्महत्या गर्नेको संख्या डर लाग्दो छ । प्रदेश नं. ५ का १२ वटा जिल्लामा आत्माहत्याको अवस्था निम्न अनुसार तालिकामा देख्न सकिन्छ ।
प्रदेश न ं ५को रुपन्देही जिल्ला आत्मा हत्याको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो । जहाँ सबैभन्दा बढी आत्मा हत्याका घटनाहरु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्ता खालका घटनाहरु हुनुमा सबैभन्दा मुख्य कारण घरेलु हिंसा जस्तैः शारीरिक, हिंसा, सामाजिक हिंसा, मानसिक हिसा, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा लगायतका समस्याहरुको कारण हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण यस्ता खालका हिंसाहरुको अन्त्य गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा यस्ता खालका सवालहरुलाई समेट्न जरुरी हुन्छ त्यसको लागि सबैले सचेत रहनुपर्छ ।